Faallo; Taariikhda qawmiyadda Tigreega, Iyo Colaadaha Isku Gedaamay. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Faallo; Taariikhda qawmiyadda Tigreega, Iyo Colaadaha Isku Gedaamay.
Faallo; Taariikhda qawmiyadda Tigreega, Iyo Colaadaha Isku Gedaamay.
Walwaal Online; Boqor Tigree ah oo Itoobiya xukuma waxa ugu dambeeyey Boqor Teodoros kaasoo sannadkii 1863-kii isagu is-diley, waxaana xilkii kala wareegay Boqor Yohannes 4-aad oo isaguna dhintay sannadkii 1889.
Geeridii Yohannes waxay ahayd mid soo afjartay boqortooyadii guunka ahayd ee (Axum Empire) taas oo soo taxnayd illaa qarnigii Caamul-fiil, wixii wakhtigaasi ka dambeeyey waxa la wareegay Boqornimada Minililik oo Axmaaro ahaa.
Qoomiyada Axmaarada waxaa caan ka ah maahmaahda ah” Shabeel dabada lama qabsado, haddii aad qabsatana lama sii daayo,waayo wuu kugu soo Jeesanayaa oo wuu ku cunayaa”.
Sidaasi oo kale, waxaa noqotay mid qawmiyada Tigreega haleeshay, iyagoo shabeelkii ay shalay dareewalka ka ahaayeen dabadana haysteen ay sii daayeen, ka dibna uu ku soo jeestay oo uu iyagii cunayo maanta.
Mudadii 28-kii sanno ahayd ee ay xukunka hayeen qowmiyada Tigreegu waxa ay beerteen colaad dhinac kasta ah, qowmiyada Axmaarada waxa ay ka qabsadeen 7 magaallo oo ay hore lahaayeen, waxayna ku beereen dad reer Tigree ah, sidoo kale waxa ay colaad dawadeedu fogaatay ay ka tabcadeen dawladda Erateriya, iyaga oo dhammaaan maamulka haatan ugu awoodda badan maamulka Tigreegu ay ahaayeen raggii hor-kacayey colaadii dhexmartay Itoobiya iyo Erateriya.
Xuduuda ugu ballaadhan waxa ay maamulka Tigree la wadaagaan dalka Erateriya iyo qowmiyada uu xafiiltan weyni ka dhexeeyo ee Axmaarada, qowmiyada Cafarta oo dhinaca bari xuduud kala leh Tigree ga waxay iyaguna ka tirsanayaan colaad iyo inay siday doonaan ka yeeleen markii ay xukunka haysteen.
Talladaba waxay ahayd mid aanay ku darsan in mar uun uu xukunku gacantooda ka bixi-doono, sida awgeedna ay derisyadooda qaar ka mid ah badbaadsadaan.
Dawlada Erateriya xilligan waxay qaadaysaa suugaantii ku jirtey gabaygii Cali Dhuux uu ku durayey Sayidka ” waa lagu digtaa ruux hadduu kuu darnaan jiraye, bal dayaayey wadaadkii waa sii dabayshadaye”.
Warbaahinta Erateriya oo dhinacooda ka faa’iidaysanaya duullaanka lagu hayo qowmiyadii ay colka ahaayeen ayaa ku warrmaysa sidan” 04 Nov 2020 – (EP) Thousands of fleeing TPLF soldiers from Humera, Gondar region in Ethiopia have crossed the border and surrendered to Eritrean Army, a source tells Eritrean Press”.
Tigreegu waa bulsho qabweyn oo caan ku ah dagaal ku faanka, madaxweynaha deegaanka Tigree Debretsion Gebremichael, sidoo kalena ah guddoomiyaha jabhada TPLF ayaa isaga oo la hadlaya Raysal wasaaraha Itoobiya wuxuu yii” Tigree waa xabaalaha lagu aaso kuwa aamusan nidaamka keligi-talisnimada, Adwa halkan ayey ku taalaa, dhergegiina waad la socotaan casharkii aanu u dhignay”.
Hadalka madaxweynaha Tigree uu ku hadlay luuqad ahaan waa mid uu ka muuqdo faan iyo kibir, dagaal ku faankuna waa mid taariikh ahaan lagu yaqaanno bulshada Tigree, waxaase ah mid uu hilmaansan yahay in xaaladihii dagaal ee Adwa War ee Faashiitihii Talyaaniga lagu jebiyey iyo kii ay jabhadaha is-bahaysinaya ee TPLF iyo EPLF ay afka ciidda ugu dareen taliskii Mingistu ay kala marxalado yihiin kan maanta.
Madaxda Axmaaradu waxa ay kaga duwan yihiin dhinaca aqoonta oo waa niman waxbartay, sida Tigreega bannaan isma aanay dhigin, sidaa awgeedna iskuma deyin inay si toos ah uga horyimaadaan dawladda uu Abiya hogaaminayo, balse way dhexgaleen oo iyagii ayaa toos uga dhex hadlaya sida laga dhex arkayo ama muuqanaysa.
Dhinaca soomaalida xukunkii Tigreegu waxa uu ahaa kii konton kun ee askari ee Itoobiyaan ah u soo diray dawladdii Cabdilaahi Yuusuf iyo Raysal wasaare Cali Maxamed Geedi, ee tawaangidii Tigreegu dhex qaadaysey magaalooyiinka Soomaalida. Kama leexan waddadii ay hore u mareen nidaamkii ay maamulladii Axmaaradu ula dhaqmi jireen Soomaalida.
Previous articleDhaxal Sugaha Imaraadka Iyo Wasiiradiisa mid ka mid ah oo Lagu Eedeyey Kufsi
Next articleSiyaasiyiin Denish ah oo doonayey inay gubaan quraanka kariimka ah isu soo bax ka dhacayey brussels.